ajụjụ Gpws anaghị arụ ọrụ n'ụgbọelu ọ bụla
1 afọ 3 ọnwa gara aga #760 by aamalk
10 ọnwa 5 ụbọchị ago - 10 ọnwa 5 ụbọchị ago #937 by DRCW
A na-arụ ọrụ faịlụ FSX site na iji faịlụ dll na ụdị 64 bit na-eme ka ha nwee ike iji xml. Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu na ị nwere ike ịgbanwe faịlụ ndị a gaa na xml
Ọ bụ ezie na aha ya na-ezo aka na FSX, nlele a ga-arụ ọrụ na FS2004. Ọ na-adabere na dsd_xml_sound3.gau.
nleleX10 = dsd_fsx_xml_sound! Ụda, 2,2,2,2,. / gauges / dsd_xml_sound.ini
nleleX11 = dsd_fsx_xml_sound! Debugger, 420,550,600,80
Mgbanwe kachasị mkpa na ọrụ nlele bụ ụzọ o si ejikwa ntọala olu. Ụdị nsụgharị ndị dị na mbụ nke njiri eji na 0 gaa 100 iji nweta ọkwa ọkwa. Agbanwewo m nke a na nso nso nke DirectSound, -10000 (na-anọchite anya nnọọ, dị jụụ) ka 0 (na-anọchite anya olu zuru oke). Ọ bụrụ na mgbanwe a ga-akpata nsogbu gị na koodu gị dị ugbu a, ị nwere ike ịtọ mgbanwe (L: Old Volume Control) iji mee ka azụghachị ahụ laghachi na usoro ochie nke iji nhazi olu. Hụ okpuru.
Maka ndị na-adịghị eji nsụgharị mbụ nke nlele ahụ, ụda nke ọ bụla na-achịkwa XML L dị iche iche: nke a na-akpọzi ya dịka LVar.) Ị na-achịkwa ụda ahụ site na ịtọlite ​​mgbanwe njikwa (LVar) na uru nke kwekọrọ na ihe ị chọrọ. Ị na-ekenye LVars ka ụda jiri faịlụ nhazi. Kọọ faịlụ nhazi na panel.cfg, dị ka nkeji ise maka ụda "Ụda" - lee ihe atụ n'elu. Nlele ahụ ga - agbaso ụzọ ndị a na - atụle eriri faịlụ nhazi enyere:
1. Ị depụtara ụzọ nke ụzọ site na ịmalite ya na 'ntụpọ' - lee ihe atụ syntax, n'elu. Ogwe a na-eme ka anyị banye na isi FS. Na ihe atụ n'elu, faịlụ .ini dị na nchekwa FS gauges, a na-akpọ ya dsd_xml_sound.ini. Ọ bụghị nanị na folda FS gauges, ị nwere ike ịdepụta nchekwa ọ bụla ịchọrọ naanị ihe ịma aka gị bụ ịme ka onye ọrụ njedebe nwere folda ị kwupụtara na sistemụ folda FS ha. Nke a bụ usoro eji nsụgharị ụda nke ụda nyocha.
2. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịmepụta ụzọ zuru ezu na faịlụ nhazi gị. Nlereanya ahụ ga-ele anya aha ya ruru eru. Site n'ịkwụsị aha nlele n'onwe ya, a na-ahapụ anyị na ụzọ na nchekwa ahụ kpọmkwem ebe ntinye arụ. Na aha aha a, ị ga-agbakwunye nchekwa nchekwa na aha faịlụ maka faịlụ nhazi gị. Dịka ọmụmaatụ, a na-etinye ụgbọ elu ule m na-emebu na nchekwa a na-akpọ:
D: \_ fsx \_ Ụgbọelu \_ b777_300
nleleX37 = dsd_fsx_xml_sound! Ụda, 2,2,2,2, \_ dsd_fsx_test_sound.ini
D: \_ fsx \_ ugboelu \_ b777_300 \_ panel \_ dsd_fsx_test_sound.ini - ịtụkwasị faịlụ nhazi ahụ n'ime ogwe ntụle nke ụgbọ elu, na nlele ụda
Biko rịba ama na na usoro a, enweghi 'ntụpọ' na nmalite nke eriri panel.cfg, mana eriri amalite na / / ma ọ bụ agwa. Nlereanya ahụ ga-emeso / / na mkpụrụokwu ahụ.
Agaghị m akwado usoro a maka ihe ọ bụla ọzọ karịa iji onwe gị na kọmputa gị. Ịkọpụta eriri faịlụ nhazi dị ka "D: \_ fsx \_ gauges \_ sound_config.ini" na-arịọ maka nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-ekesa panel ahụ. Anyị amaghị n'ezie ebe njedebe njedebe FS.
4. Ọ bụrụ nlele ahụ achọtaghị ":" agwa, ọ ga-eche na ị na-anwa ịkọwa ụzọ n'otu ụzọ ahụ dịka usoro 2, n'elu. Ọ ga-agbakwunye eriri eriri dị na ụzọ ebe a na-eburu nlele ahụ, na-enye mkpụrụokwu slash ka ọ dị mkpa. Ịnọgide na ihe atụ nke ugbo ule m, na nlele a na-ejupụta na folda panel, na-enye faịlụ nhazi faịlụ dika nke a:
nleleX37 = dsd_fsx_xml_sound! Ụda, 2,2,2,2, panel_sounds \_ dsd_fsx_test_sound.ini
D: \_ fsx \_ Ụgbọelu \_ b777_300 panel \_ panel_sounds \_ dsd_fsx_test_sound.ini
5. File nhazi ndabara. Ọ bụrụ na akọwapụtaghị faịlụ nhazi ọ bụla, ma ọ bụrụ na nlele ahụ enweghị ike ịchọta faịlụ ahụ akọwapụtara, ọ ga-eji aha aha. Nlereanya ga - ele anya ụzọ aha ya (ma ọ bụrụ na gị ma ọ bụ onye ọrụ njedebe ejirila aha ya,) wepụ "extension" extension, gbakwunye ".ini" faịlụ nhazi ndabara dị na otu nchekwa ahụ nlele ahụ, aha otu aha ahụ. Usoro a kwesịrị ibelata iwu iji kwipụta faịlụ nhazi na ọtụtụ ikpe. Rịba ama na ọ bụrụ na nlele ahụ na-eji ndabara n'ihi na ị gwaghị faịlụ nhazi, ọ ga-eme ya n'ebughị ọganihu ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ na-eji ndabara n'ihi na ọ pụghị ịchọta faịlụ ị kwuru, ọ ga-emepụta igbe ozi Windows na-agwa gị otú ahụ.
A na-eji faịlụ nhazi maka ọtụtụ ihe. Nke kachasị mkpa n'ime ihe ndị a bụ ịmekọrịta n'etiti ụda ịchọrọ igwu egwu na LVars ị ga-eji na-achịkwa ụda ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ele ntinye ndepụta faịlụ a na njedebe nke akwụkwọ a, ị ga-ahụ na o nwere isi edemede atọ. N'ime ndị a, a na-akpọ otu [Ụda] ma kpọọ otu [LVars]. Onye ọ bụla nwere ndepụta nke ndebanye aha. Ọnụ ọgụgụ ahụ bụ otu esi ejikọta njikọ n'etiti ụda na LVar. Biko mara na nke ahụ bụ nanị ihe dị mkpa maka ọnụ ọgụgụ nke ndenye. Sound00 ụda na ụda na-adaba na LVar na Lvar00, ụda ụda nke Sound01 dabara na LVar na Lvar01, wdg.
Dịka ị nwere ike ịnakọta ugbu a, na ịkọ LVars na faịlụ nhazi ahụ, ị ​​na-ezite aha efu. I tinyeghị "L:" na mbido, ma ọ bụ ", nọmba" na njedebe. Nke a enweghị ihe jikọrọ ya na otu ị ga-esi nweta mgbanwe na XML, ọ bụ naanị na ọ dị mkpa ka ọrụ C / C ++ rụọ ọrụ ndị a.
Mgbe ị na-ekepụta ndenye maka ụda onwe ha na faịlụ nhazi gị, ị nwere ike, ọ bụrụ na-ịchọrọ, dee olu a ga-etinye na ụda ahụ mgbe eburu ya. Hụ ntinye abụọ mbụ dị na sample sample .in n'okpuru. Nke a bara uru ma ọ bụrụ na ị, ma ọ bụ onye ọrụ njedebe nke ngwaahịa gị, na-eche ụda ma ọ bụ ụda ụfọdụ, dịka e dekọrọ, dị oke ụda. Ị nwere ike ịkọwa olu a ga - eji mee ya, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu ịme ya n'ime nlele gị. Ịkọpụta ọkwa dị elu n'ụzọ dị otú a agaghị egbochi gị ịgbanwe ọkwa ọkwa mgbe emesịrị.
Mgbe ị na-ede ụda na faịlụ nhazi ahụ, nlele ahụ ga-agbaso otu usoro ozo maka ịkọ aha ụda dịka ọ na-eme maka ịkọ aha faịlụ nhazi. Ị nwere ike iji ụzọ ụzọ (malite na "ntụpọ" na-ezo aka na folda n'ime FS nchekwa osisi) ma ọ bụ ị nwere ike ịmepụta ụzọ zuru oke, na-eji ụzọ gaa faịlụ nhazi ahụ dịka isi (site na ịkọ a \_ ma ọ bụ / dịka njirimara mbụ nke eriri nke kachasị elu, ma ọ bụ site na ịdepụta folda na faịlụ na -adịghị slash.) Lee nhazi mbụ dị na sample sample faịlụ. Ọ na-akọwa nchekwa nke a na-akpọ PanelSounds, nke dị n'ime nchekwa ebe a chọtara faịlụ nhazi ahụ, dị ka ebe maka ụda olu.
1 (> L: ỤfọdụXMLControlVar, nọmba) ga-akpọ ụda otu ugboro, n'enweghị mgbanwe gbanwere olu ma ọ bụ pan pan.
8 (> L: YetAnotherXMLControlVar, nọmba) ga-ebu ụzọ wepụta ọkwa ntọala na usoro ntọala. Mgbe ahụ, ọ ga-etinye ha na ụda nke ajụjụ, n'ikpeazụ, site na ịmalite igwu ụda na usoro ịgbachi.
10 - Wepu obere ụda. A ga-ebute ụda na-akpaghị aka na ntụgharị ụzọ, ma ọ bụrụ na ụda faịlụ dị ukwuu, ma mee ya na ya, ị nwere ike ịchọ iwepụ ya ozugbo, ma weghachite ebe nchekwa. Iwu a nwekwara ike ịba uru n'oge ule. Ị nwere ike ime mgbanwe na ụda ma weghachite ya, na-enweghị ebigharị panel ahụ dum.
11 - Jide ụda, jiri ngwaọrụ olu Windows. Site na ndabara nlele ga eji ngwaọrụ ụda Windows maka ịkpọ ụda. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ngwaọrụ olu Windows (nke bụ ụda olu abụọ, ma ọ bụ ngwaọrụ USB) i nwere ike iji uru nke 11 mee ka ụda maka igwu egwu ngwaọrụ. Niile iwu ndị ọzọ, ọ bụrụ na ha ga-ebu ụda tupu ha arụ ọrụ nke ha, ha ga-ebu ụda maka ngwaọrụ ụda Windows. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ngwaọrụ olu, ọ ga-adị mkpa iji iwu a buru ụzọ buru ụda tupu i mee ihe ọ bụla na ya. Kwesịrị ka ngwaọrụ olu ahụ bụrụ ngwaọrụ ahụ dịka ụda ụda, a ga-eji ụda ngwaọrụ ahụ dị n'elu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụda na-egwu site na isi onye ọrụ ahụ, ọ bụrụ na ọ dị ugbu a, ịnwere ike iji uru a. Ọ bụrụ na onye ọrụ ọzọ anaghị enwe isi, otu ụda ahụ ga-egwu site na ụda olu ọ bụla onye ọrụ nwere. Tinyere ngwugwu a bụ uru nke ga-ekwe ka onye ọrụ kwuo kpọmkwem ngwaọrụ dị mma maka nlele iji mee. Ana m atụ anya na n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okwu niile, a gaghị achọ ọrụ a. Ọ ga-adị mkpa ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ chere na ndabara ndabara Windows anaghị adabara FS, ma ọ chọghị ịgbanwe ndabara Windows.
12 - Dị ka 11 n'elu, mana na-eji ụda ahụ eme ihe na-eji ngwaọrụ ụda Windows.
Na Ngalaba Config Nkebi faịlụ .ini, enwere ike ịtọ ihe ndị na-esonụ. E gosipụtara ha niile na ụkpụrụ omume ha kwekọrọ.
Ndagharị = 10
Ndabere bụ 10, mana kachasị ugbu a bụ 1000. (Ee, ị gụrụ nke ahụ!) Enweghị m ike ịhụ onye ọ bụla na-eji ọtụtụ ahụ, mana echekwala ebe nchekwa ugbu a, yabụ na ọ dịghị nsogbu dị oke oke. Ọ ga-ekwe ka ndị ọrụ raara onwe ha nye iji zere itinye ihe karịrị otu ihe atụ nke nlele na otu otu. Ahụla m nke ahụ. Idebe kachasị na ọnụ ọgụgụ ụda ị ga-eji mee ihe ga-ebelata ma CPU na iji ebe nchekwa site nlele.
Ọ bụrụ na ụdị njehie ọ bụla na-apụta, a ga-edozi akara njikwa nke njirimara na uru a. Ndabara bụ -1. Ị nwere ike ịhọrọ ọnụọgụ integer ịchọrọ, ma e wezụga ntanetị sitere na 1 gaa na 99, nke edebere maka iwu ndị dị kpọmkwem. Ihe nlele ugbu a nwere ọtụtụ igbe ozi Windows nke wuru na nke ahụ ga-apụta na ihe omume nke njehie. M na-atụ anya na ọ bụ naanị onye ị ga-ahụ ga-eme ma ọ bụrụ na nlele ahụghị faịlụ dị mma nke akọwapụtara na faịlụ .ini. Iji mee ka nsogbu edozi nsogbu, ọ ga-agwa onye ọrụ nke anaghị achọta faịlụ. Ọ bụrụ na njehie emee, a ga-eleghara mgbanwe ọ bụla ọzọ na ụda akara nke ụda ahụ. A ga-edozi ụda ndị ọzọ.
Ị nwere ike ịtọ mgbanwe a na 3 ụkpụrụ bara uru.
1 - kwụsịrị ụda ụda niile na-akpọ ugbu a.
2 - mutes niile na-ada ụda. Ọ na-ewepụta olu ha gaa na -10000, ma ha anaghị egbochi ha n'egwuregwu n'ezie.
3 - na - emegharị ụda ụda niile. Ọ weghachite ntọala ọkwa ha echekwara.
Na nke ọ bụla, a ga-emegharị agbanwe ahụ na 0.
Jiri mgbanwe a gosipụta ọkwa ntọala iji jiri SetVolume command (3). Ederede dị ka ọnụọgụ abụọ n'etiti 0 (oke zuru oke) na -10000 (nchịkwa 100 db, inaudible.) Na omume, ọnọdụ ọ bụla na-erughị ihe -3000 (30 db attenuation) ga-adị irè.
Jiri mgbanwe a gosi ezigharị ngwugwu maka iji ya na iwu SetPan (5). Pan dị ka uru dị n'etiti -10000 (aka ekpe) na 10000 (nri zuru oke). 0 dị n'ime.
Jiri mgbanwe a iji nweta nzere olu a nwetara na iwu GetVolume (4).
Jiri mgbanwe a iji nata usoro nkwụnyeghachi na iwu GetPan (6).
Jiri mgbanwe a iji nweta usoro nkwụsịtụ weghaara na iwu njikwa Get Looping (9).
Ngbanwe a ga-enweta nkwụnye olu mgbe ọ bụla mgbe enyere iwu iwu ọkpọ ikpeazụ. Rịba ama na ọkwa ọkwa a agaghịzi etinye ya n'ọrụ - ọ nwere ike gbanwere ya na iwu SetVolume.
Nke a na-agbanwe ga-enweta na-akpaghị aka nkwụnye pan nke eji mgbe enyere iwu ikpeazụ egwu egwu. Rịba ama na ọnọdụ pan a nwere ike ọ gaghị adị - ọ ga-agbanwe na iwu SetPan.
Mgbanwe a ga-enweta usoro mwube na-akpaghị aka mgbe e nyere iwu iwu ikpeazụ.
Ndị ọzọ LVARS, aha anaghị ahọpụtara:
Na FS9 na FSX, mgbanwe a ga-alaghachi 1 ma ọ bụrụ na ụda FS nọ n'ọrụ na 0 ma ọ bụrụ na ha abụghị. Ụda olu nke a ga-agbaso ọnọdụ ụda FS - ha ga-ada ogbi ma ọ bụrụ na ụda FS ma ọ bụ ma ọ bụrụ na a kwụsịtụ sim.
Njikwa Mgba Ochie:
Ntọala. Ọ bụrụ na e setịpụrụ ya na 1, nlele ahụ ga - eji 0 dị elu nke ochie na 100, ya na 100 na - egosipụta oke olu na 0 na - anọchi anya kpamkpam. Ọ bụrụ na e setịpụrụ ya na 0, nlele ahụ ga-eji kpọmkwem DirectSound, nke bụ -10000 maka ịmịchaa kpamkpam, na 0, nke na-egosi oke olu. Rịba ama na ọ bụrụ na nzute nlele ahụ bara ezigbo uru maka mpịakọta na mpaghara [Sounds] nke faịlụ .ini ahụ, ọ ga-eche na ịchọrọ iji ochie ahụ ma mee ka agbanwe agbanwe a. Maka nyocha ọhụụ, ọnụ ọgụgụ DirectSound na-anọchi anya ntinye na 100ths nke decibels, ya mere, uru nke -10000 na-anọchi anya njedebe nke decibels 100. Adịghị agbanwe mgbanwe a ozugbo a setịpụrụ ya - ihe ọjọọ ga-eme.
Ngbanwe a ga-egosi ma ngwaọrụ ngwaọrụ dị iche dị. Na-alaghachi 1 ma ọ bụrụ na usoro ahụ nwere ihe dị iche iche Windows na ụda olu na 0.
Ụdị mgbanwe ndị a weghachite ozi zuru ezu gbasara mbipụta Flight Simulator na nlele ahụ na-aga n'ihu.
FSVersionMajor na-alaghachi 9 maka FS2004 na 10 maka FSX. Nyere ya na ikpe ịchọrọ iji ụdị koodu ọ bụla dị na aka gị.
FSX Naanị. Na-alaghachi 1 ma ọ bụrụ na ejiri njikọta SimConnect na 0 ma ọ bụrụ na ọ bụghị.
Na-alaghachi 1 ma ọ bụrụ na a kwụsịtụ simulation, na 0 ọ bụrụ na ọ bụghị.
Na FS9 na FSX, mgbanwe a ga-alaghachi 1 ma ọ bụrụ na nlele ejiri ụda ya na 0 ma ọ bụrụ na ụda anaghị ada.
Onye na - eme ihe
Na FS9 na FSX, mgbanwe a ga-alaghachi 1 ma ọ bụrụ na njirimara XML ejiriwo ụda ya site na itinye mgbanwe GlobalCommands na uru nke 2. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla na-ada ụda na-enweghị ike ime ka ọ ghara idozi ya site n'itinye ọkwa ha, ụda agaghị eme ka ọ ghara ịdị na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ kwụsịtụ ọnọdụ. Ọ ga-adị mkpa ka ị ghara iji aka gị mee ihe site na ịtọ ntọala Global Commands na 3. Ọ bụrụ na ụda adighi-emetụ, agbanwe agbanwe ga-enwe uru efu.
FSX Naanị. Weghachite site na SimConnect.
0 - N'èzí (ntụpọ) anya.
1 - 2D cockpit ele
2 - 3D VC ele
4 - Orthogonal (map) anya
FSX Naanị. Nhọrọ nke aka bụ efu. Ọ bụrụ na e setịpụrụ na uru efu, uru ViewSystemStatus, n'elu, a ga-ebipụta ya na Igbe Ozi Windows, oge ọ bụla ọ gbanwere. N'ụzọ doro anya, naanị maka nnwale.
FS2004 Naanị. Weghachite oge agbaji agbaji.
Ihe atụ .ini:
Ewezuga ihe mbido abụọ mbụ na mpaghara [Ụda], ihe atụ na-esonụ na-egosipụta njirimara ndabara na nlele ahụ ga-eji na enweghị onye ọrụ akọwapụtara uru, ma ọ bụ na enweghị nhazi nhazi. Ebube ụda nke mbụ gosipụtara nkọwa nke ụda dị n'ime folda aha ya bụ PanelSounds, ebe nchekwa a dị n'ime folda panel. Ihe ntinye uzo abuo abuo gosiputara nkowa nke oke olu ka ekwenye gi na olu mgbe eburu ya uzo. Ihe ntinye na nke atọ na-egosipụta nkọwapụta nke faịlụ, n'ime folda, na nchekwa ahụ dị na folda ahụ dịka faịlụ nhazi.
Sound01 =. \_ Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_01.wav, -2000
Sound02 = Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_02.wav
Sound03 =. \_ Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_03.wav
Sound04 =. \_ Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_04.wav
Sound05 =. \_ Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_05.wav
Sound06 =. \_ Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_06.wav
Sound07 =. \_ Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_07.wav
Sound08 =. \_ Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_08.wav
Sound09 =. \_ Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_09.wav
Sound100 =. \_ Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_100.wav
Sound999 =. \_ Ụda \_ dsd \_ dsd_xml_999.wav
Nchịkọta ikpeazụ: 10 ọnwa 5 ụbọchị gara aga site na DRCW.
Oge ike page: 0.097 sekọnd